दाहाललाई ओलीको कडा जवाफ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल
नाइजेरियामा सशस्‍त्र समूहको भीषण हमलाः ११० किसान मारिए →
काठमाडौं : नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कडा जवाफ दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरोपित गर्दै सचिवालय बैठकमा आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसपछि मध्यमार्गी नेताहरूले साझा प्रस्ताव ल्याउन पहल गरे पनि ओलीले शनिबार आफ्नो ३८ पृष्ठ लामो ५३ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
ओलीले दाहालको प्रस्ताव बैठकमा छलफल या परामर्श गर्न रीतसमेत नपुगेको, नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको संगालो मात्रै भएको भन्दै प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको बताएका छन्। अग्रगामी एजेन्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप÷प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुन नहुने ओलीको भनाइ छ। उनले दाहालको प्रस्ताव कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नभई आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोगपत्र भएको र त्यसले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरेको ठोकुवा गरेका छन्।
ओलीले पार्टीभित्र चलिरहेको बहसको चरित्र कस्तो हुने ? स्वस्थ नीतिगत बहस हुने कि वारपारको लडाइँ हुने या एकतामा हिँड्न खोज्ने या एकता विग्रह र विघटनको बाटोमा हिँड्न खोज्ने भन्दै प्रश्न गरे । ‘पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो ? यो स्वास्थ्य नीतिगत बहस हो कि वार कि पार को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपाईं ले रोजेको बाटो वादप्रतिवाद संवादको हो कि वादप्रतिवाद र विग्रहको ? एकता छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता विग्रह र विघटनको
बाटोमा ? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरूको ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन्।
दाहालले एकतर्फी लिखतमार्फत पार्टीभित्रका असहमतिलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदलेको र यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने काम गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘विगतमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु। जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटसमटस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला ?’, ओलीले प्रश्न तेस्र्याएका छन्।
ओली र दाहाल दुई जना अध्यक्ष रहने गरी ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। त्यसयता २९ महिनामा बैठकमा ओली र दाहालको छुट्टाछुट्टै एकल राजनीतिक दस्ताबेज त्यो पनि एकअर्काेबीच यसरी चर्को आरोप–प्रत्यारोप लगाएर प्रस्तुत भएको यो पहिलो पटक हो। एकतायता सचिवालय बैठक ७२, स्थायी कमिटी ५ र केन्द्रीय कमिटी बैठक २ पटक बसेको छ। औपचारिक बैठकमा दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा साझा दस्ताबेज पेस गर्ने गरेका थिए।
ओलीले दाहालको प्रस्तावको प्रस्तुति, तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको भन्दै कि आरोप पुष्टि गर्न र राज्यको कानुन र पार्टी विधानअनुसार आफूलाई कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन्। ‘तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन। मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।
यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे आत्मालोचना गरेर पनि उम्किन सक्दैन। आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ,’ ओलीले शनिबार बैठकमा बन्द खाममा राखेर नेताहरूलाई वितरण गरेको प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘तपाईंलाई मेरो चुनौती छ, कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन र पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुहोस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथिको निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।’
दाहालले कात्तिक २८ मा सचिवालयका आफूसहित ५ नेताको समर्थनमा १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ओलीले पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देश निर्माणमा आवश्यक त्याग गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
ओलीले आफू पार्टी नेतृत्व त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै उल्टै दाहाललाई त्यसका लागि तयार हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘तपाईं (दाहाल)ले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ।
मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। योभन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ?’, ओलीले भनेका छन्, ‘म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?’
दाहाल चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेलमा लागेको ओलीको आरोप छ। ‘के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ? दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन हुन्छ।
मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ।
त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ। के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने, फेरि किन सधँैभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौं भने हामीसँग लाखौं कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?’, ओलीले
उनले संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा उपयुक्त समयमा दाहालसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्। ओलीले विवाद समाधानका निम्ति दाहालको प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गर्नुपर्ने र भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकको निर्णयबाट अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘मैले मेराविरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाउनुभएका आरोपको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ र पार्टीलाई ०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ’, ओलीले भनेका छन्, ‘म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ। पार्टीका सबै कमरेडलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु। म सबैको जिम्मा लिन तयार छु।’
उनले नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्यसहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने इच्छा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने गरी सुदृढ गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको मुलुक नयाँ जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेर बिदा हुने आफ्नो इच्छा रहेको उनको भनाइ छ। उनले सबैलाई कम्युनिष्ट हुनुको गौरववोध गर्ने, ठाडो शिर लगाएर रातो झन्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने इच्छा रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन÷अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन दिन नहुने जनाएका छन्।
उनले बहुमत अल्पमतको विधि पार्टी कमिटीमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिले एकताको आधार फेर्नुपर्ने र विधान संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धामा जान आफू तयार रहेको चुनौती पनि दिएका छन्। ‘तपाईं (दाहाल)ले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ।
आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ। कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ। सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साविक एमालेको एक जना भए पनि बढी संख्या छ।
बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंविरुद्ध प्रयोग गरिए के हुन्थ्यो ?’ ओलीले भनेका छन्, ‘ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौँ। मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ। महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु।’
उनले दुवै अध्यक्ष कार्यकारी भएको भन्दै एउटा अध्यक्ष सरकार र अर्काे पार्टी काममा केन्द्रित मात्र हुने भन्ने निर्णय भएको प्रष्टोक्ति दिएका छन्। ‘मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र ? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एक जना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन्। ओलीले दुई अध्यक्षबीच भएका असहमतिलाई जबर्जस्ती सैद्धान्तिक रंग दिने कोसिस दाहालले गरेको भन्दै ती विषयमा बहस गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘म तयार छु।
खासगरी, मुलुकले अवलम्बन गरेको सामाजिक–आर्थिक दिशा र समाजवादका सम्बन्धमा, आन्दोलनका दुई धारको योगदान तथा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटोका सम्बन्धमा, राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि अभियान र यससम्बन्धी हाम्रा पछिल्ला प्रयासका विषयमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही कुरा वैचारिक र राजनीतिक ढंगले स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, ओलीले भनेका छन्।
सरकार नवउदारवादी भएको दाहालको आरोपको पनि ओलीले जवाफ फर्काएका छन्। ओलीले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारमाथि तपाईंको ‘नवउदारवादी’ आरोप सुन्दा मैले भन्नै पर्छ– या त तपाईंले नवउदारवाद के हो, बुझ्नुभएको छैन। या त तपाईं देशभित्र भइरहेका यी कामलाई देख्न चाहनुभएको छैन। कमरेड, सबै कुरा बजारको जिम्मा छाडिदिने, ठूला पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य पन्छिने एवं चरम व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवाद र हामीले लिइरहेका यो बाटो कहाँनिर भेट हुन्छ ? के यी सबै काम ‘नवउदारवादी’ र ‘दलाल पुँजीवादी’ राज्यसत्ताअन्तर्गत सम्भव छ ? के यी विषय हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा गरिएका र तिनको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेका विषय
सरकारका कतिपय काममा प्रश्न उठाउँदै दाहालले समाजवाद, दलाल पुँजीवादका विषयमा तेस्र्याएको प्रश्नमा पनि ओलीले सरकारका कामका फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै जवाफ फर्काएका छन्। सरकारका काममा प्रश्न उठाउँदै आफूमाथि दाहालले उठाएका कतिपय प्रश्न पूर्वाग्रही भएर उठाइएको जिकिर ओलीले गरेका छन्। सम्झौता नै नभएका विषयमा पनि आफूलाई जोडेर दाहालले हद पूर्वाग्रही देखाएको ओलीको भनाइ छ।
आफूलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका दाहाललाई नै ओलीले आरोप सोझ्याएका छन्। ‘भ्रष्टाचारका थुप्रै विषय जनस्तरमा चर्चामा छन्। कतिपय विषय सम्बन्धित संवैधानिक अंगको टेबुलमा पनि छन्। मान्छेहरूले कतिपयमा तपाईंलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु’, ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘म त अख्तियारप्राप्त संस्थाले विधिसम्मत ढंगले गर्ने काममा राजनीतिक व्यक्तिहरू बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छु। यस्ता विषयमा प्रतिशोधको राजनीति गर्नुहुन्न, राज्यका सम्बन्धित अंगलाई सुदृढ बनाएर कानुनबमोजिम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।’
ओलीले नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको प्रश्न गरेका छन्। यसमा छलफल, अनुसन्धान गर्न सुधारको विशेष अभियान चलाउन आफू तयार रहेको भन्दै दाहाललाई यसमा तयार हुने हो भनी प्रश्न गरेका छन्।
एमसिसिका विषयमा पनि ओलीले परियोजनामा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रवादी हुने र हस्ताक्षर भएको परियोजना कार्यान्वयन गरौं भन्ने कसरी राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘तपाईंले एमसीसी परियोजना’bout पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनुभएछ। तपाईंले उल्लेख नगर्नुभए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो।
अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने मचाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हितविरोधी’ ?’ ओलीले भनेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो सरकारले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको ओलीको प्रस्तावमा छ। संविधानले देखाएको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने बाटोमा आफूहरू हिँडेको भन्दै ओलीले यो विषयमा दाहालमा अझै काफी द्विविधा रहेको पनि आरोप लगाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘यो राज्यव्यवस्था, तपाईंको दृष्टिमा सुदृढ गर्नुपर्ने व्यवस्था हो कि बदल्नुपर्ने व्यवस्था ? लोकतन्त्रका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रका निम्ति गरिने आन्दोलनमा भिन्नता हुन्छ कि हुँदैन ?’
ओलीले पार्टीलाई अब विकास र समृद्धिको संवाहक र अगुवा बनाउने कि गुटहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउने समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यस उचाइमा ल्याइ पुर्‍याउन जनताको बहुदलीय जनवादले खेलेको भूमिकाको सकारात्मक चर्चा गर्दा दाहालमा छटपटी र व्यग्रता देखेर आफू अचम्मित बन्ने गरेको ओलीको भनाइ छ।
उनले अब हामी हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्दैन ? नेकपाको पहिचान र बाटो’bout उठेका प्रश्नको सैद्धान्तिक जवाफ दिनु पर्दैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।
पार्टी एकतापूर्वका सहकार्य र संविधान निर्माणसम्मका प्रसंगमा देखिएका कटुता र सम्बन्धलाई आरोपको चंगुलमा राखेर ओलीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको साटो विघटन गरेर जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको र आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यातेर लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपरेको विषयसम्म उठाएका छन्। नातागोतालाई मात्र लाभका पद दिलाउन आफ्नै सहयोद्धा, त्याग बलिदान गरेका घाइते अपांगताहरूलाई बेवास्ता गर्नेसम्मको काम दाहालले गरेको आरोप ओलीले लगाएका छन्। उनले झण्डै डेढ घण्टा सम्बोधन गर्दै निजी स्वार्थ त्यागेर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
दाहालले गरे प्रतिवाद
ओलीले प्रस्ताव पेश गरेपछि दाहालले बैठकमै प्रतिवाद गरेका थिए। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार दाहालले प्रधानमन्त्रीमा अझै दम्भ र अहंकार देखिएको बताएका थिए। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओलीकै कारण समस्या देखापरेको दाहालको भनाइ थियो।
‘मैले राखेको विषयवस्तुलाई आरोपपत्र भन्नुभयो। यहीँनेर तपाईं (ओली)मा अहंकार देखियो। तपाईंको दम्भ, घमण्ड, अहंकारले नै समस्या निम्त्याइरहेको छ। फेरि पनि निम्त्याउनेछ’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तपाईं जसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ, यो राम्रो बाटो होइन। बहुमत सचिवालय सदस्यको प्रस्ताव स्विकारेर जानुको विकल्प छैन।’
दाहालले ओलीको जवाफ अफवाहको पुलिन्दा भएको बताएका थिए। ‘दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जसरी मेराविरुद्ध मेरै समूहका साथीहरूलाई प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। पशुपति प्लाजामा बैठक राख्नुभयो। प्रचण्डको मानिस तानेर कसरी एक्ल्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नुभयो, त्यही विन्दुदेखि पार्टी, एकता कमजोर भयो’, उनले
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने पार्टीमा आएका दुई अध्यक्षका प्रस्ताव दुई अध्यक्षका प्रश्न मात्र नभई पार्टीकै समस्या भएको र त्यसलाई सबैले पार्टीभित्रै समस्याका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका थिए। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठकले लिने निर्णय अब सबैले मानेर जानुपर्ने बताएका थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने बैठक बोलाउन माग गर्दा बैठक नै नबोलाउने कुरा जायज मान्न नसकिने बताएका थिए। अब बैठकमा आएका प्रस्तावमा छलफल गरेर आउने निष्कर्षलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने र पार्टी एकतालाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा सचिवालय बैठक अब १६ मंसिरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेछ। उक्त बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमा नेताहरूले सचिवालयमा छलफल गर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौं ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?
जुन व्यत्तिका मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेसमटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यत्तिाmबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला ?तपाईंले रोजेको बाटो वादप्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ?
कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुत्ता समयमा तपाईंसँग जवाफ माग्ने नै छु। युद्धका बेला काम लागेका विधि शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सधैंभरि काम लाग्दैनन्।(अन्नपूर्ण )